I-Pomeranian Husky: I-Complete Dog Breed Overview kanye Nomhlahlandlela - Izinhlobo
I-Pomeranian Husky: I-Complete Dog Breed Overview kanye Nomhlahlandlela
UPomeranian Husky, owaziwa nangokuthi iPomsky , iyinhlangano yezinja zezinja.
Isiphambano phakathi kwePomeranian neSuskyan Husky, zinguhlobo olusha impela, kepha sezivele zithandwa kakhulu ngenxa yokubukeka kwazo okuhle.
Bobabili abazali banobuntu obufanayo, obuzozuzwa yiHusky Pomeranian Mix: amandla, ubuhlakani nokudlala.
Obunye bobuhle bePomeranian x Husky inani lemibala namaphethini abangangena kuwo.
Bahle kakhulu ngezingane, izilwane ezifuywayo nezinye izilwane ngakho-ke bazongena ngokujabula empilweni yomndeni. Ubungako bazo obuncane babenza balungele ukuhlala efulethini.
Qhubeka ufunde ukuze uthole ukuthi yini eyenza lokhu kuhlangana kube ngumngane omuhle kangaka!
Yini i-Pomeranian Husky?
Imidlwane yasePomeranian Husky
I-Pomeranian Husky Temperament
Usayizi wePomeranian Husky nokubukeka
Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwe-Pomeranian Husky
Noma lo mngani onoboya engaziwa yiAmerican Kennel Club basathandwa kakhulu.
IHusky Pomeranian izuze njengefa ubuntu bayo obunamandla umzali wayo osebenza ngokomlando, uHusky , nesifiso salo sothando nokunakwa okuvela ePomeranian.
Lokhu kubangele inja enamandla, edlalayo futhi ehlakaniphile kodwa futhi enothando.
Basheshe bathola ukuthandwa phakathi kwabanikazi bezinja okokuqala ngqa ngosayizi wabo omncane ongalawuleka nokubukeka okuhle kukaHusky, ngamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka .
Ubuntu babo obudlalayo nobudlalayo kubenze baba yizilwane ezihamba phambili ezihamba phambili zemindeni nabantu abadala emafulethini noma ezindlini.
Le pooch uhlobo lwakamuva lwenja yomklami futhi itholakala kakhulu eYurophu naseMelika.
Abazali babo bangama-canine aziwa kakhulu anomlando omude phakathi kwabo.
Ama-Huskies ngokomlando ezaziwa njengezinja ezisebenzayo kubantu baseChukchi ababengabazingeli futhi beqoqa ababehlala endaweni ebandayo kakhulu eSiberia.
Kusekuseni kakhulu zazisetshenziselwa ukudonsa izihlibhi emabangeni amade. Bahlakaniphe kakhulu, banamandla okuqina futhi banamandla amaningi.
IPomeranian uhlobo lweSpitz futhi yaqanjwa ngegama lesifunda sasePomeranian eYurophu Ephakathi.
Bayinzalo evela ezinhlotsheni ezinkulu ezisebenzayo zeSpitz ezagcina sezingena eYurophu. Kodwa-ke, uhlobo oluncane lukhuliswe ngokuyinhloko ukuze lube umngane nenja yethanga.
Ngoba lokhu kuyimbungulu yamuva nje futhi kuyinhlanganisela yama-canine angama-purebred, i-American Kennel Club ayiwaqapheli njengama-purebred pure.
Akunakwenzeka ukuthi iKennel Club iyoke ibone lolu hlobo ngokohlobo lwalo lwamanje, ngoba akukho ukuvumelana maqondana nobumnene nokubukeka ukusetha isilinganiso sohlobo.
Kukhona amakilabhu ambalwa ahlinzeka ngemininingwane ngohlobo:
iRegistry Registry yaseMelika
iPomsky Club yaseMelika
i-International Pomsky Association
Ngenxa yokushoda kwezindinganiso zomfuyi ezivunyiwe, ezivame ukusethwa ngamaKennel Clubs, uma usuvele ubeke amehlo akho kulo mngani omuhle onoboya kuzofanele wenze ucwaningo lwakho ukuthola umfuyi omuhle .
Umxube wePomeranian Husky
Usayizi 10-15 amayintshi
Isisindo 15-30 amakhilogremu
Isikhathi sokuphila 13 - 15 iminyaka
Uhlobo Lokuzala Imiksi nokuningi
Ifanele i- Abanikazi Besikhathi Sokuqala
Umbala Mhlophe, Mnyama, Tani, Cream, Orenji, Luhlata okwesibhakabhaka, Merle, Bomvu naBrown
Isimo Iyadlala, ihlakaniphile, iqotho, inamandla futhi iqinisekile
Le midlwane ethandekayo ingenye yezinhlobo ezibiza kakhulu zomklami emhlabeni.
Ithegi labo lentengo ebizayo (kwesinye isikhathi lidlula u- $ 3,000 USD ngomdlwane ngamunye) livela isidingo soku ukusabalalisa ngokungeyikho iPomeranian ukudala lokhu kuhlanganiswa.
Umdlwane wePomeranian Husky ungenye yezimbiza ezibiza kakhulu emhlabeni, ngamanani asukela ku- $ 1,000 kuya ku- $ 3,000 USD.
Lokhu kungenxa yokuthi kunzima kangakanani ukuzalanisa okwenza ukuthi le nja ingavamile kakhulu.
Izinja zetiacup zishibhile ukuzithenga, kepha kuyalulekwa kakhulu ukuthi zingazithengi njengoba zivame ukuqhamuka ezigayweni ze-puppy futhi zingadla ifa lezinkinga ezibucayi zezokwelapha ngenxa yokuzala okungafanele.
Kujwayelekile ukuthola uHusky njengedamu (okungukuthi umama) ngoba kulula ukuthi uhlobo olukhulu lukwazi ukuthwala udoti. Amasayizi we-Litter ngokuvamile aphakathi kwemidlwane emi-5 kuye kwayi-7.
Isisindo nosayizi we-Husky Pomeranian Mix nakho kungahluka ngokuya ngokuthi yimuphi umzali abamlandelayo. Kodwa-ke bavame ukufinyelela ekuvuthweni ngonyaka owodwa, ngakho-ke ungalindela ukuthi babe sebekhule ngokugcwele ngosuku lwabo lokuzalwa lokuqala.
Le pooch izuze ifa lokuqina lokwethembeka kumzali wabo wasePomeranian. Bayakuthanda ukunakwa futhi kungenzeka bakuthole uma sebeqala ukukhonkotha .
Kuhlanganiswe neHusky, amagxolo abo awazwakali nje kuphela kepha futhi aphakama kakhulu. Uma uhlala edolobheni lapho ukukhonkotha ngokweqile kungathathwa njengenkinga lolu hlobo kungenzeka lungabi olwakho.
UPomeranian Husky osebenza kahle futhi oqeqeshiwe akufanele akhombise noma yiziphi izimpawu zokuhlukumezeka. Kepha, ngokuthembeka okukhulu abesabi ukuvikela indawo yabo kanye nomndeni wabo ngawo wonke amandla abo.
Njengokufuya okuncane kungenzeka bazizwe besongelwa ezimweni ezithile kunezinhlobo ezinkulu.
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, lezi zilwane ezifuywayo ziyizilwane ezihambisana nazo . Banobungane kakhulu futhi bayayithanda inkampani yabanikazi babo, bayakujabulela ukukulandela nxazonke lapho uya khona.
Banobuntu obuthanda ubumnandi futhi futhi balungele umdlalo engadini engemuva.
Kodwa ungakhohliswa ukubukeka kwabo okumnandi nokungenacala. Yiziphi izinja ezincane ezingenasayizi ezenzelwe uhlamvu.
Ukuba isilwane esizimele futhi esizethembayo, uma uyeka ukusebenza uma kuziwa ekuqeqesheni bazosizakala futhi babe nenkani.
Le nhlanganisela yenza isilwane esikhulu somndeni; bathanda ukuphumula futhi badlala nabanikazi babo.
Uma kungenakuhlanganiswa kusukela ebuncaneni lokhu kungakhula kube yisifo senja encane, okusho ukuthi bazoba ngaphezu kokuzivikela nokuqina kubantu ongabazi.
Ukuzijabulisa kusenesikhathi kubalulekile kulolu hlobo lokuzwana nezingane, izinja nezinye izilwane. Ikakhulukazi uma bekhula nezingane noma ezinye izinja, kubalulekile ukuthi bafunde ukuthi bangaxhumana kanjani nabanye.
Umngani onobungane obusondelene kahle uzodlala ngenjabulo nezingane nezinja.
Le nhlanganisela ingeza ngemibala namaphethini amaningi ahlukahlukene.
Usayizi wabo konke kuncike kubazali babo. Uma benoHusky abaningi bazobe bekhudlwana futhi besinda kepha iPomeranian eyengeziwe izophumela ophuzweni oluncane futhi olulula.
Imvamisa zikala ndawondawo phakathi kwamasentimitha ayishumi kuya kwayi-15 bese zinesisindo esisukela kumakhilogremu ayi-15 kuye kwangama-30.
Kukhona okuhlukile kwe-teacup Pomeranian Husky, engamasentimitha ayi-7 kuye kwayi-10 ubude futhi inesisindo esingamakhilogremu ama-5 kuye kwayi-10 kuphela.
Ukubheka izinhlobo zabazali kuzokunikeza inkomba engcono kakhulu yokuthi i-canine yakho izoba nkulu kangakanani.
Isizathu esikhulu sokuthi le canine ingaziwa yinoma iyiphi iKennel Club enkulu kungenxa yobubanzi bokubukeka okuhlukile abangaba nakho; okwenza kube nzima ukusetha indinganiso yokuzalanisa.
Azikho izingqimba ezimbili ezibukeka ngokufana kepha kwesinye isikhathi zinezici ezifanayo.
Okuvamile ukuthi izici zobuso babo zingamaHusky athe isiqu sabo singaphezulu kwePomeranian. Ngokuyisisekelo zibukeka njengezidlulele Izimpisi ezinhle ezinamanzi amancane .
Le pooch futhi ithatha izici ezabiwe ezivela kubo bobabili abazali, njengejazi labo elimbili elijiyile nomsila ogobile.
Enye yezimfanelo ezinhle zePomeranian Husky yizinhlobonhlobo zamaphethini nemibala abangangena kuyo:
Kokubili ijazi nombala wamehlo kungahluka kakhulu phakathi kwemidlwane.
Zingangena ngombala owodwa noma ukuxubana; merle uthandwa kakhulu. Amehlo abo angaba luhlaza okwesibhakabhaka (njengeHusky), noma ansundu (njengePomeranian) noma kwesinye isikhathi umbala owodwa .
Njengabazali bayo, ungalindela ukuchitheka okulingene kusuka engutsheni yabo ejiyile futhi eluhlaza okotshani.
Ijazi labo langaphandle lingaba bushelelezi njenge-Husky noma Fluffy njengePomeranian .
Ijazi labo lingabonakala lilukhuni ukuligcina kodwa ukuxubha nsuku zonke, ukukhipha izigaxa, izinwele ezifile nedander, kuzokugcina kusesimweni esihle.
Ukuxubha akusizi nje kuphela ukugwema ukumatanisa kepha futhi kusabalalisa nooyela babo bemvelo kulo lonke ijazi labo ukuyigcina iswakeme kahle .
Ukugeza kufanele kwenziwe kanye ezinyangeni ezimbalwa, noma noma nini lapho kungcola kakhulu, nge-shampoo efanelekile . Zama ukungabagezi kakhulu ngoba kungadala ukuthi isikhumba sabo some.
Kungumqondo omuhle ukuthi utshale izigaxa zezipikili ezihloniphekile ukunquma izinzipho zazo njalo futhi.
Kodwa-ke ngeke udinge ukutshala imali esikalini sokuzilungisa ngoba akufanele udinge ukusika inja yakho. Ijazi labo liyabasiza ukulawula ukushisa komzimba wabo emakhazeni nasekushiseni, ngakho ungangcolisi ngalo.
Ukudlala kuyindlela enhle yokuzivocavoca nokubopha inja yakho
Ngobuntu obujabulisayo futhi obudlalayo, usayizi omncane nezidingo zokuzilungisa okuncane, lokhu kuhlangana kulungele imindeni nendawo yokuhlala noma indlu.
Umhlahlandlela Ama-calories angu-600
Ukudla kwekhwalithi ephezulu, ikakhulukazi izinhlobo ezincane , enamaprotheni amaningi ezilwane, amafutha kanye nama-carbohydrate alinganiselwe kuzoqinisekisa ukuthi lolu hlobo olusebenzayo luthola konke ukondleka abakudingayo ukuze baphile impilo enempilo.
Izinja ezincane kufanele zidle kuphela ezikudingayo hhayi ngokweqile, ngaphandle kwalokho zingakhuluphala kalula.
Ukuthi ubaphakela kangakanani konke kuncike ekutheni banesisindo esingakanani, iminyaka yabo kanye nezinga lomsebenzi.
Izinja ezinesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-20 kuye kwangama-30 zidinga amakhalori angama-30 ngekhilogremu ngalinye lesisindo somzimba. Izinja ezincane zine-metabolism esheshayo ngakho-ke zizodinga eziningi, kanti izinja ezinkulu ziphambene ngakho-ke zidinga kancane.
Uma isilwane sakho sinesisindo esingamakhilogremu angama-20 sizodinga ama-calories ayi-600 usuku ngalunye (20 * 30) okulingana nezinkomishi ezi-2.5 zokudla ngosuku.
Amaminithi Imizuzu engama-30
Isigamu sabo sikaHusky sazalelwa ukusebenza ngakho-ke noma iPomeranian x Husky ingahle ibonakale incane; zisadinga ukuzivocavoca nsuku zonke.
Kodwa-ke ngenxa yobukhulu babo obuncane, abadingi ukuzivocavoca okukhulu njengezinja ezinkulu. Ama-juts adlala nabo engadini anganela futhi kuzokusiza ukuqinisa isibopho sakho .
Kepha njengezinja zonke bathanda ukuphuma nokuhamba, bethola izinto ezintsha namaphunga.
Zama ukuhamba nge-pooch yakho imizuzu engama-30 nsuku zonke futhi uma kusabonakala sengathi bane-hyper kakhulu engeza ukudlala okujabulisayo ekugcineni kosuku.
Ngabazali ababili abahlakaniphile, futhi ube yimibukiso emikhulu, akufanele ube nenkinga yokuqeqesha isilwane sakho.
Kodwa-ke, bangaba ne-streak enenkani, ngakho-ke lolu hlobo ludinga umnikazi onamandla oqinile onesineke futhi ongabafundisa ukuthi babe yinja elinganiselayo.
Ngokuvuma okuningi okuhle, bazothanda ukujabulisa futhi bayakujabulela ukufunda amaqhinga amasha inqobo nje uma bezothola okuthile endleleni.
Ukuqeqeshwa kusenesikhathi nokuzijabulisa njalo kuyindlela engcono kakhulu yokuthola okuningi kunja yakho, qala ngemithetho eyisisekelo yendlu njengokuthi kungabi khona ukweqa phezulu.
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi izinja ezinqamulelayo (okusho izinja zabaqambi) zinempilo kunalezo ezizalwayo ngenxa yedamu elikhulu lezakhi zofuzo .
Kodwa-ke, uma bobabili abazali bathambekele ekutholeni izinkinga ezithile zezempilo imidlwane yabo isenethuba elikhulu lokuyizuza nayo.
Ngenhlanhla zombili i-Husky yaseSiberia ne-Pomeranian ziyizinhlobo ezinempilo. Kodwa-ke, kunezimo ezithile le pooch engazithuthukisa:
I-cardiomyopathy ehlanjululwayo isifo senhliziyo esivame kakhulu esithinta izinja . Ithuthuka ngokushesha futhi izodala izinkinga zokuphefumula, ukukhwehlela, ukungathandi ukudla nobuthakathaka.
Izinkinga zamehlo kungenye inkinga okufanele uyibheke. I-Entropion ivame kakhulu kumaHuskies; yisimo esidala ukuthi izinkophe zabo ziqale ukugingqika ziye ngaphakathi. Lokhu kungofuzo futhi kuzoqhubeka kube kubi kakhulu uma kungalashwa.
AmaPomeranian athanda izinkinga zamazinyo nokutheleleka kwezindlebe. Lezi zinkinga zingagwenywa ngokunakekelwa okufanele nokunakwa.
Ekugcineni, i-trachea ewayo ikakhulukazi ithinta izinhlobo ezincane. Izimpawu zifaka phakathi ukulwela ukuphefumula, ukukhwehlela kanye nezinsini ezimpunga noma eziluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngokunakekelwa okulungile, ukudla okunempilo nokuvivinya umzimba okungaguquguquki, isikhathi sempilo sikaPomeranian Husky siphakathi kweminyaka eyi-13 kuya kwengu-15 ubudala.
IPomsky iyinja enhle okokuqala emindenini noma kuma-singletons ahlala ezindlini nasemafulethini.
Lolu hlobo oluncane kodwa olunenhloso lwenza kahle kunoma yiliphi ikhaya elinothando futhi elizibophezele. Usayizi wabo ongalawuleka usho ukuthi bangahlala emafulethini, kanti abalingiswa babo abadlalayo babenza balungele nemindeni.
Lezi chappies ezinamahloni akufanele zithathwe kancane; banokuphila okuningi kubo futhi bafuna ukukuphila ngokugcwele.
Bathandana kakhulu futhi abafuni lutho olunye ngaphandle kwalo lonke uthando nokudumisa kwakho.
Noma zincane zisadinga ukuzivocavoca okungenani isigamu sehora ngosuku. Bathanda ukubukisa futhi bangathatha amakhono amasha ngokushesha ngakho-ke ukufundisa inja yakho amaqhinga amasha kuzosiza ukuqinisa isibopho sakho.
Sicela wabelane ngolwazi lwakho ngalolu hlobo olungezansi.
IShollie: Konke mayelana neBorder Collie German Shepherd Mix
isikhathi sempilo ye-teacup chihuahua
ungayifaka kanjani imichilo yomzimba enjeni
ushokoledi lab imidlwane amagama abesilisa
ukuhlanganiswa kwesiJalimane impisi husky
udinga kangakanani ukulala umdlwane wezinyanga ezinhlanu ubudala
amagama amahle ama-pitbulls asekhaleni aluhlaza okwesibhakabhaka